ShweMinThar: ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဘုရားကြီး မိန့်ကြားတဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သြဝါဒ
ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဘုရားကြီး မိန့်ကြားတဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သြဝါဒ
အမေရိကား မှာ စာမေးပွဲ သွားဖြေမယ့် အသက် (၁၃) နှစ်အရွယ် ကလေး ကို ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဘုရားကြီး မိန့်ကြားတဲ့ မြန်မာ တွေအားလုံး အတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သြဝါဒ
☘️ သူတို့ ဓလေ့ ထုံးတမ်း ကို သိအောင်လုပ်ရမယ်။ အကုန် လိုက်စရာမလိုဘူး။ ပညာ ကတော့ အကုန်သင်ရမယ်၊ သူတို့ဆီက ရသမျှ ပညာ အကုန်သင်။ အရေးကြီးတာက ပညာ ၊ ပညာ ဆိုတာ subject matter ပေါ့ နော်။
☘️ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထိန်းသိမ်းထား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ကဘယ်လောက် တော်သွားသွား ကိုယ်က အမေရိကန်လည်းမဖြစ်ဘူး၊ အင်္ဂလိပ် လည်းမဖြစ်ဘူး။ ကိုယ့် လူမျိုး က ကိုယ့် လူမျိုး ဘဲ။
☘️ အဲတော့ လောကကြီး မှာ ကိုယ့် လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာကို မသိဘူးလို့ပြောရတာလောက် ရှက်စရာကောင်းတာမရှိဘူး။ ကျန်တာတော့ သိချင်သလောက်သိ, တတ်ချင်သလောက်တတ် သိလေ တတ်လေ ကောင်းလေဘဲ။ ဘာဖြစ်ဖြစ်
☘️ ဘုန်းဘုန်း တို့ကတော့ သူတို့က ကိုယ့်ကို အင်္ဂလိပ်စာ မတတ်ဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် မင်းကော ဗမာ စကားတတ်လား၊ အဲလိုဘဲပြန်မေးမယ်။ အဲတော့ မင်းနဲ့ငါနဲ့တူတူဘဲ။ မင်းလည်း ဗမာ လိုမတတ်ဘူး၊ ငါလည်း အင်္ဂလိပ်လို မတတ်ဘူး။
☘️ အရေးကြီးတာက ဘာသာစကား ထက် subject matter ကို တတ်ဖို့လိုတယ်။ ဂျပန် တွေတို့ ကိုရီးယား တွေတို့ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စာပြောတတ်တဲ့သူရှားတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့က subject matter သိတယ်။ Subject matter တတ်ဖို့က အဓိကဘဲ။
☘️ ဘာသာစကား မတတ်ရဘူးလို့ ဘုန်းဘုန်း က ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အင်္ဂလိပ် နဲ့တင် မလုံလောက်သေးဘူး။ ဂျာမန်လိုလည်းတတ်အောင်လုပ်, ရုရှား လိုလည်းတတ်အောင်လုပ်။
တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှန်သမျှ အကုန်လုံးတတ်ရင်ကောင်းတာဘဲ။ All languages are very useful.
☘️ ဘုန်းဘုန်း တို့ဆို ကိုရီးယား သွားရင်, မတတ်,တတတ်နဲ့ ကိုရီးယား လိုပြောရင် “အညာစယောတို့၊ ဂန်ဆနီးဒါး” တို့ပြောရင် သူတို့သိပ်သဘောကျတယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာဘာသာစကားတတ်ရင် အင်မတန်မှကောင်းတယ်။ သူတို့ကလည်း အခုဆို မြန်မာ လို “မင်္ဂလာပါ” ကစပြောတယ်။ အဲလိုပေါ့။
☘️ ဘာသာစကား က တတ်တာကောင်းတယ်။ ဘာသာစကား တတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ့်ရဲ့ tradition ဟာ မပြောင်းရဘူး ပြောင်းလဲလို့မဖြစ်ဘူး။ ဟုတ်တယ်မလား။ I will never be American. Burmese is Burmese. ဗမာ လူမျိုးဘဲဖြစ်မယ်။ နာမည်တော့ပြောင်းလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ကပြောင်းလို့မရဘူး။
☘️ အဲတော့ကိ်ုယ်မွေးတဲ့ ကိုယ့် မိဘ၊ ကိုယ့် တိုင်းပြည် ပေါ်မှာ ခိုင်မာတဲ့ ယုံကြည်ချက် ရှိရမယ်။ တိုင်းပြည် နဲ့ လူမျိုး နဲ့က မဆိုင်ဘူး။ ညံ့တာက တခြားအကြောင်းကြောင့်ညံတာ။ ညံ့သွားတာကို
☘️ အဲဒီညံ့စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကို ငါ့လက်ထက်ကျ ကောင်းအောင်လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ထားရမယ်။ ဟုတ်တယ် မလား။ ညံ့တာတခြားကြောင့်ညံ့တာ၊ လူမျိုး ညံ့လို့ ညံ့တာ
☘️ တစ်ခါတစ်လေကျတော့မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒို့နိုင်ငံ အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေတယ်။ အမှန်ကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆို ကြိုးစားမှု အားနည်းကျတာ ပေါ့။ ကြိုးစား ရမှာပေါ့။ ကိုယ့်ကျ ကြိုးစား မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားရမယ်။ ဘယ်သူ့မှ အပြစ်တင်စရာ blame လုပ်စရာမလိုဘူး။
☘️ ကိုယ့်ဟာကိ်ုဘဲ တိုးတက်အောင်ကြိုးစား။
ကိုယ်တစ်ယောက်တိုးတက်သွားရင် ကိုယ့်မိသားစုတိုးတက်မယ်၊ ကျန်တဲ့သူတွေလည်းတိုးတက်မယ်။ မိသားစုတိုင်း မိသားစုတိုင်းတိုးတက်မယ်။
☘️ ဗမာ စကား မေ့တယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ယူထိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ပျက်စရာ upset ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ဝမ်းနည်းစရာဘဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ tradition တစ်ခုဆုံးရှူံးသွားတယ်။
☘️ အခု ဗမာ ပြည် ထဲမှာလည်း ကလေး တွေဟာ International school တွေနေပြီးတော့ ဗမာ စကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတာ မိဘ တွေက ဂုဏ်ယူနေကြတယ်။ ကိုယ့်မှာဆုံးရှူံးနစ်နာမှုကြီး တစ်ခုဖြစ်တာကို မသိကြဘူး။
☘️ အဲဒါဘာတွေဖြစ်ကုန်တုန်းဆိုတော့ အမေရိကန် မှာနေတဲ့ မိသားစုမွေးတဲ့ကလေးလေးတွေ
ဒီ ၆ နှစ်အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ ကလေးထက်ငယ်တယ်။ အဲဒီအရွယ်လေးတွေကထည်းကစပြီးတော့ ဗမာလေးတွေဟာ ဗမာစကားမတတ်တာ အတော်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာ သဘောမပေါက်
သေးဘူး။ အဲဒါ လအော် လအဲ ဖြစ်ကုန်တာ။
အောက်ကလိ အာ, အာ အောက်ကလိ။
☘️ အောက်ကလိအာ ပုံပြင်
“အောက်ကလိ” ဆိုတာ ကြက်တွန်တဲ့ အသံ ကို အသံစွဲ လုပ်ထားတာ။
“အာ” ဆိုတာ ကျီးကန်း ရဲ့အသံ၊
အဲဒီပုံပြင်မှာ ဌက်မရှိတဲ့ဒေသကို ကျီးတစ်ကောင်ကို ခေါ်သွားတာ။ ဌက်မ ရှိတဲ့အခါကျတော့ ကျီး က အဲဒေသမှာရှိတဲ့ ကြက်နဲ့အိမ်ထောင်ကျတယ်။ သူကတခြားဌက်မရှိဘူး။
☘️ အဲဒီကျီးနဲ့ကြက်နဲ့ရတဲ့ ကလေး တွေက ဘာဖြစ်တုန်းဆိုရင် အမေ ဖက်ကအသံ၊ အဖေ ဖက်က အသံ တစ်ဝက်စီဘဲ
ပြောတတ်တယ်။ အဲတော့ ဘာဖြစ်တုန်းဆိုတော့ ကျီးသံအော်ချင်ရင် “အာ အောက်ကလိ”, ကြက်သံအော်ချင်ရင် “အောက်ကလိ အာ”၊
အဲဒါကိုဆိုတာပြောတာ။ မိမကျ ဖမကျ
“အာ အောက်ကလိ”, “အောက်ကလိ အာ”
☘️ အဲလိုမဖြစ်စေဘဲ ကိုယ့် ဘာသာစကား ကို
ကိုယ်က ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်။ ကိုယ့် tradition ကို ကိုယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်။
☘️ ကိုယ့် ဘာသာစကား မေ့တာဂုဏ်ယူစရာ
မဟုတ်ဘူး။ တတ်စရာရှိရင် တော့ မင်းတတ်ချင်သလောက် မိုးပျံအာင် တတ်အောင်သင်။ အင်္ဂလိပ်တတ်ချင်ရင် အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ပြိုင်ပြီးပြောနိုင်ရမယ်။ ကြိုးစား။ ကြားလား။
🖌 ဆရာတော် ဘုရားကြီးမိန့်ကြားသော
အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့် သြဝါဒကို ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြင့်
Share from : မောငျစှယျစုံကမျြး
Posted by Alex Aung at 5:58 AM
Labels: ပညာရေး၊, ဟောပြောချက်